Caqabadda: 5 Talooyin muhiim ah oo ku saabsan sida looga hortagi karo khiyaamoka iyo xariirka
Qiyaastii 1.6 bilyan oo spam email ah ayaa maalin kasta loo soo diraa dhammaanba adduunka. Waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba 20 emaylka laguu soo diro ay yihiin spam. Waqooyiga Ameerika, waxaa suurtagal ah in la raadsado ilaha 80% ee spam tan iyo markii loo yaqaano inay ka timaaddo 200 spammers caanka ah. Spam waa arrin walaac ah tan iyo markii ay sal u noqoto saldhigyada weerarka phishing - uk windows vps cheapest. Khataraha phishing waxaad ku soo celineysaa xisaabtaada iyo aqoonsigaada markaad spam inta badan ka careysiiso.
Oliver King, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu ku faahfaahiyaa hababka soo socda oo aad adigu iska ilaalin kartid spam.
Furo cinwaanada emailka badan.
Marka hore, samee cinwaanka emailka shakhsi ahaaneed iyo xaddido isticmaalka waraaqaha shakhsi ahaaneed ee dhowr qoys iyo saaxiibo. Xaaladaha intooda badan, spammers waxay dhisaan liisaska emailka iyagoo ku biiraya magacyada guud, tirooyinka, iyo erayada. Markaad rabto in aad isticmaasho magacaaga iyo magaca koowaad ee cinwaanka emailkaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad noqoto hal abuur iyo xulasho isku dhafan ee jilayaasha. Ugu horreyntii, waxaad dooneysaa inaad adigu ku adkaato shakhsi si aad u keento cinwaankaaga shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed. Hadda fur fur cinwaanada dadweynaha oo u adeegso xaaladaha kaa doonaya inaad ku qorto adeegyada internetka ama iska diiwaangeliso kulan. Isku day inaad qaadato tallaabooyinka soo socda cinwaanka emailkaaga. Isbedel markasta. Isticmaal cinwaanada emailka dadweynaha badan..Labada dhaqdhaqaaq ayaa kaa caawin doona inaad ogaatid ciddii bixisa cinwaankaaga emailkaaga ee spammers. Ka dib marka la go'aamiyo goobo ama goobo lagu iibinayo cinwaanka emailkaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato oo sidoo kale u sheeg Google.
Marna ha ka jawaabin spam kasta.
Inta badan spammers waxay hubiyaan jawaabaha jawaabaha iyo rasiidhada cinwaanadooda emailka spam ayadoo ujeedadoodu tahay inay go'aamiyaan waxqabadka. Tani waxay muujinaysaa in aad ka badan tahay inaad ka jawaabto emails, fursadaha ugu sareeya waa in tirada spam kor u kici doonaa.
Dib u fikir ka hor intaadan go'aansan inaad iska joojiso.
Waxaa la ogaadey in spamersku hadda u dirayaan been abuur ah fariin qoraal ah oo ay ku xiran yihiin faafin faahfaahin ah. Xeeladaha waxay ku shaqeeyaan danahooda iyagoo hubinaya in markaad riixdo "abaabulis" qadarka spam ee aad hesho kororka. Haddii e-mayl ay ka timaado ilo aan la aqoon oo aad ku dallacdo inaad joojiso, waxaa lagugula talinayaa in aad diidid diidmada.
U hubso in galkaagu uu la socdo.
Developers browsers ayaa inta badan cusbooneysiiya codsiyadaas si loo hubiyo in dhammaan noocyada ammaanka ee hadda jira. Ku guuldareysiga inaad cusbooneysiiso browserkaaga ayaa kombuyutarkaaga u soo bandhigaya qalabka ama boogaha kaas oo soo ururin kara macluumaadkaaga shakhsiyeed wuxuuna u dirayaa spamka. Waxaa lagugula talinayaa in aad hubiso in badhankaaga cusbooneysiintaada ee marwalba ay tahay inuu ku dhaqaaqo ilaalinta xogtaada.
Maalgashiga filtarada anti-spam.
Hubi in bixiyaha koontadaada emailkaagu leeyahay waxyaabo badan oo anti-spam ah. Gmail ka soo Google ayaa leh bog gaaban oo ay si toos ah u feyleyso email-ka taasoo kufaraysa in uu spam ka soo galo soo galitaankaaga. Tani waxay u adeegtaa si loo yareeyo dhibka uu abuuray spam gaar ahaan marka ay u arkaan habka ay u socdaan khadka hoose.